Umbono ongemva yi-20/20 - i-Galveston County Food Bank
Ukujonga ngasemva ngu-20/20
admin Februwari 2, 2021 0 Comment
Ukujonga ngasemva kungama-20/20, kwaye kuhlala kuyinyani emva konyaka ophelileyo esiye sanamava kuwo. Ngewawenze ntoni ngokwahlukileyo ukuba ubunokubona kwangaphambili kulo nyaka uphelileyo? Mhlawumbi utyelele usapho rhoqo, uthathe uhambo, okanye ugcine imali.
Kulo nyaka uphelileyo sithathe inkululeko ebesiyithathela phezulu, kunye nokudala imiceli mngeni kubantu abaninzi, kodwa ikwazise imfesane kwabanye ngaphaya kokulindelweyo. Ibhanki yokutya yaseGalveston County iqhubeka ngokuzama ukufezekisa injongo yayo "yokukhokela umlo wokuphelisa indlala eGalveston County" ethe yahlangabezana nemiceli mngeni emininzi kunyaka ophelileyo ngenxa yobhubhane. Nale mingeni, sahambisa i-8.5 yezigidi zeepawundi zokutya okunesondlo kunye nemveliso ngo-2020. Phambi kwalo nyaka, ngaphezulu kwabahlali abangama-56,000 baseGalveston County babesemngciphekweni wokungabikho kokutya. Ngenxa yezithintelo eziziswe bubhubhane, ezinje ngokungaqeshwa kunye nokuncitshiswa kweeyure zomsebenzi, izinga lentlupheko eGalveston County lenyuke laya kwi-13.2%. Ngombulelo, ngentsebenziswano yethu neFeding America, Feeding Texas, Houston Food Bank, abathengisi abohlukeneyo kunye nama-arhente angamaqabane angama-80 eGalveston County, sikwazile ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zokuhambisa ukutya okunesondlo kubahlali abasweleyo. Iinkonzo zethu zibandakanya ukuhanjiswa kokutya kubantu abadala kunye nabakhubazekileyo, iinkqubo zokutya zabantwana kunye neelori ezihambayo ezihambisa ukutya okunesondlo kubamelwane bethu. Ngenxa yazo zonke ezi nzame, sikwazile ukukhonza abantu abangama-410,896 ngo-2020. Siyaqhubeka nokuqinisekisa ukuba iindawo zokutya kulula ukuzifumana ngemephu yokusebenzisana kwiwebhusayithi yethu phantsi kwethebhu ethi "Fumana Uncedo". Sikwasebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo ukunxibelelana ngohlaziyo oluqhubekayo ukuya kumzuzu kunye notshintsho.
Amavolontiya yinxalenye ebalulekileyo yokusebenza kwethu ekuhleleni iimveliso ezinikelweyo, ekwakheni iibhokisi zokutya zabantu abadala kunye neenkqubo zabantwana, ukuhambisa ukutya kwiindawo ezihambayo nakwezinye. Inkxaso eyandisiweyo evela eluntwini ibingaphezulu kweeyure ezingama-64,000 zamavolontiya ezichithe neearhente zethu kwingingqi yeGalveston County. Sineecawe ezininzi, izikolo kunye nemibutho yabucala efikelela ekunikezeleni ngeendawo zabo ukuhambisa ukutya okuhanjiswayo. Sikwasikelelekile ngokuba abahlali benikela ngexesha labo kunye neenzame zabo ngokusingatha ukutya kunye nokuqhutywa kwengxowa mali egameni lethu. Yonke impumelelo yethu iziswa kwinkxaso yoluntu eqhubekayo esiyifumana yonke imihla.
Sijonge kulo nyaka uphelileyo sinombulelo kuye wonke umntu oye wakwazi ukuzinika kancinci. Ukujonga emva kungama-20/20, kodwa ikamva lethu ngoku kwaye ukuphelisa indlala yinto engekho ngasemva kwethu. Nceda uqwalasele ukunika ummelwane wakho ikamva elisempilweni. Sisafuna amavolontiya, ukuqhuba ukutya, abameli kunye nabaxhasi. Ndwendwela iwebhusayithi yethu, www.bangcangco.com, ukuze ufunde okungakumbi.
Ngaba ungasinceda ukuba sikhokele umlo olwa nendlala?
egqithileyo ngeposi Previous: Ukusuka kwidesika yoMququzeleli wethu wamaVolontiya
Okulandelayo elilandelayo: Ngexesha lasehlobo